बैठक बस्नुअघि प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न किन गए ? — onlinedabali.com
बैठक बस्नुअघि प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न किन गए ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । भोलि पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दैछ, मंगलबार साँझ प्रचण्ड शितल निवास जानेलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
आज दिनभर दुबै पक्ष भोलिको बैठकलाई लिएर दौडधुप चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री ओली, महासचिव बिष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहितको बैठक पनि साँझसम्म चलेको थयो ।
प्रस्ताव फिर्ता वा बैठक सार्न गरेक अस्वीकार गरेका थिए । भोलिको बैठकमा कसरी पेश हुने भन्नेमा छलफल गर्न ओली समूहको बैठक बसेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई राष्ट्रपति भण्डारीले भेट्न बोलाएपछि शितल निवास पुगेको बताइएको छ । बैठक सार्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ओलीले राष्ट्रपतिलाई गुहार गरेको र त्यही विषयमा छलफल गर्न भण्डारीले बोलाएको स्रोतको दाबी छ । भोलिको बैठकबारे छलफल गर्न प्रचण्डलाई बोलाइएको बताइएको छ ।
दिउँसो महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई भेटेर ओलीको सन्देश सुनाएका थिए । ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने नभए बैठक सार्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटमा पौडेलले ओलीको सन्देश सुनाएका थिए । जवाफमा प्रचण्डले दुबै कुरा असम्भव भएको जवाफ पठाएका थिए।
प्रचण्डले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ओलीले महासचिव पौडेल र सचिवालय सदस्य इश्वार पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए ।
ओली समूह नआएपनि प्रचण्ड बैठक चलाउने संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हटेका छन् । उनले अन्तिम प्रस्तावको रुपमा सहमतिमा बैठक गर्नुपर्ने बताएका छन् । ओलीले आफू पनि बैठक गर्न पक्षमा रहेको तर सहमितमा बैठक बस्नु पर्ने बताएका छन् ।